Siyaasiyiinta xisbiga ODM oo ku xigeenka madaxweynaha dalka dhaliil u jeediyay – The Voice of Northeastern Kenya
Hoggaamiyaasha siyaasadeed ee ka tirsan xisbiga ODM ayaa doonaya in madaxweynaha dalka Mr. Uhuru Kenyatta uu billaabo olole si deg deg ah looga jawaabayo saameynta abaaraha ay ku yeesheen 17 ka mid ah dowlad deegaanada dalka.
Madaxa siyaasiyiinta laga tirada badan yahay ee baarlamaanka dalka Mr. John Mbadi iyo xildjhibaanka deegaanka bariga Suna ee ismaamulka Migori Junet Maxamad ayaa baaqan soo saaray iyagoo dhanka kale ku xigeenka madaxweynaha dalka William Ruto ku dhaliilay hadal uu jeediyay oo ah inuunan jirin qof Kenyaan ah oo ilaa iyo hadda gaajo u dhintay.
Mr. Mbadi ayaa hoosta ka xariiqay inaan noolosha shacabka loo adeegsan Karin in la xaqiijiyo sababta keentay dhimashada inay gaajo tahay iyo in kale.
Mr. Junet Maxamad ayaa su’aal geliyay sababta qaar ka mid ah muwaadiniinta dalka ay baahi daran oo saamaysay ugu dhimanayaan iyadoo dhanka kale dowladdu ay sheegeyso inay cunno badan ku jirto bakhaarada waweyn.
Xildhibaanka ayaa mid nasiib darro ah ku tilmaamay hadalkii uu jeediyay Ruto ee ahaa inay waxba kama jiraan yihiin wararka la soo tabiyay ee sheegaya in 11 qof ay saameynta ka dhalatay abaaraha awgood u dhinteen.
Dowlad deegaanada qaar ka mid ah shacabka ku nool ay caawimaadda u baahan yihiin ayaa kala ah Wajeer, Tana River, galbeedka Pokot, Tharaka Nithi, Samburu, Nyeri, Marsabit, Laikipia, Mandera, Lamu, Kitui, Kilifi, Isiolo, Garissa, Embu, Baringo iyo Turkana.
Shalay ayay hay’adda laanqayrta cas Kenya codsatay lacag dhan 800 oo milyan oo shilin si ay ugu garab istaagto in ka badan hal milyan oo qof oo u baahan gargaar.
← Guddiga EACC oo soo jeediyay in xabsi daa’in lagu xukumo dadka ku kaco musuqmaasuqa
Baaq Loo Diray Xildhibanada Golaha Shacabka Ee Ku Maqan Safarada Dibadda →